ရာသီဥတုကောင်းသောကြောင့်ကမ်းခြေကိုရေချိုးပြီးအပြင်ပန်း၌ပျော်မွေ့လိုစိတ်ပေါ်လာသည်၊ သို့သော်မအောင်မြင်မီသင်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ရမည်။ ဒါကသင်ကမ်းခြေမှာတစ်ရက်ဖြုန်းဖို့လိုသမျှပဲ.
သင်၏အရာများ၌ထည့်ရန်တစ်ခုခုရယူခြင်းမှစတင်ပါ။ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုဆယ်ခုခန့်အတွက်လုံလောက်သောပမာဏရှိသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သေးလွန်းလွန်း။ မကြီးသင့်ပါ။ ကျောပိုးအိတ်၊ အိတ်သို့မဟုတ် duffel အိတ် ... သင်မည်သည့်စတိုင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
နေရောင်ကာကွယ်သည့်ကမ်းခြေတွင်တစ်ရက်နေရန်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုမမေ့ပါနှင့်။ သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်၊ SPF50 + နာမည်ကြီးတံဆိပ်တစ်ခုမှ မင်းအမြဲတမ်းမှန်နေမှာပါ နေရောင်ခြည်နှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားမှုအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် Clinique မှဤကဲ့သို့သောထိခိုက်လွယ်သောstickရိယာတုတ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စဉ်းစားပါ။
ကမ်းခြေပေါ်တွင်အိပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်သုတ်ပုဝါသည်အောက်ဖော်ပြပါပုံစံများကဲ့သို့ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသော်လည်းလှပသော motif များရှိသင့်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဒီဇိုင်းများ, အထူးသဖြင့်ဒဏ်ချက်စတိုင်ထဲကဘယ်တော့မှမ။
အယ်လ် Corte Ingles
အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တာကိုအလွန်အမင်းညှစ်နေခြင်းမှစကားလုံးလိုင်းများဖြင့်အဆုံးသတ်လိုပါကထုပ်ပိုးရန်မမေ့ပါနှင့် ဦး ထုပ်နှင့်နေကာမျက်မှန်.
သို့မဟုတ်ထိုအရာများကို ပို၍ ဝတ်ဆင်ပါ။ လာမည့်အရာများအတွက်နေရာလွတ်ချကာတံခါးအပြင်သို့ထွက်သွားသည့် အချိန်မှစ၍ သင်၏နွေရာသီစိတ်ဓာတ်ကိုအတောင်ပံများပေးသည်။
အစားအစာအတွက်အပူအဖုံးတစ်ခု၊ စတိုင်ကျလှသည့်ခြေညှပ်ဖိနပ်အချို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ဖြတ်ကူးနိုင်သောရေကူးဝတ်စုံ (သင်လည်း ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်) ကမ်းခြေတွင်တစ်နေ့တာနေထိုင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများစာရင်းကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အိုးလည်းထည့်သွင်းရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် ရေချိုးကန်ကြားမှာဖျော်ဖြေဖို့တစ်ခုခု ဘောလုံး၊ ကဒ်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာအဆိုပြုထားသောကမ်းခြေဂေါ်ပြားအချို့ဖြစ်နိုင်သည် (လက်ကိုင်ဖုန်းမရေတွက်ပါ) ။
တွမ် Ford ကား
အစိုင်အခဲ & အစင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » သငျသညျကမ်းခြေမှာတစ်ရက်ဖြုန်းဖို့လိုအပ်သမျှ
ငါဆောင်းပါးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမယ့်ငါ falya အတွက်ပနားမား ဦး ထုပ်ကိုဝတ်ဆင်
ဒီထက်နည်းပနားမား ဦး ထုပ်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏
River Island မှမြေထဲပင်လယ် palette နှင့်ဂရပ်ဖစ်ပုံနှိပ်